Tech for Marketing Archives - rangoon.tech
By Kyaw Zin Hted / Tech for Marketing / March 29, 2022 March 29, 2022
By Kyaw Zin Hted / Tech for Marketing / January 15, 2022 January 15, 2022
There are two common objectives used to run interactive marketing campaigns on digital. This isacampaign for engagement at the MOFU level andacampaign to increase sales at the BOFU level.
Engagement campaigns are not about immediately boosting sales, but about engaging customers by offering something valuable for audiences. For this reason, if sales do not increase immediately, but because of the rewards and attention of gamification, those who do not know your brand/product will gain awareness through this campaign. Engagement from the campaign can establisharelationship between the brand and the customer who has not yet purchased. Customers who already know the brand will be excited and fun when they join the campaign, remembering your brand and getting stronger brand recall, and will be ready to choose your brand when they consider buying your brand’s product category. Therefore, in addition to Affective emotional ads that can make an emotional connection with the audiences that usually run at the Consideration stage, such gamification engagement campaigns can help to build desire for your brand.
Sales promotion campaigns are, as we all know,aform of lottery (lucky draw) that buys our product. By using tech, it is much more efficient and effective than traditional campaigns due to the benefits such as can retrieve the data of the winners, can generate leads by adding an opt-in form, and real-time control over the prize. Instead of trying to winalottery by buying your product, you can useacoupon campaign to get traffic to your store or website by spreading coupon voucher codes. rangoon.tech is offering digital sales tools such as Spin & Win and Digital Scratch Card at affordable prices.
Digital ပေါ်မှာ Interactive marketing campaign တွေ run တဲ့အခါ အသုံးများတဲ့ objective ၂ ခုကို ရှိပါတယ်။ အဲ့ဒါကတော့ MOFU အဆင့်မှာ Engagement ရဖို့အတွက် campaign နဲ့ BOFU အဆင့်မှာ sales တက်ဖို့အတွက် campaign ပဲဖြစ်ပါတယ်။
Engagement campaign များဟာ စျေးအရောင်းကိုချက်ချင်းတက်ဖို့မဟုတ်ပဲ brand ဘက်က customer တွေအတွက် value တွေပေးပြီး engage လုပ်တဲ့ campaign မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ့အတွက် ချက်ချင်း sales မတက်ပေမယ့် reward နဲ့ gamification ရဲ့ attention ကြောင့် အဆိုပါ campaign မှတဆင့် ကိုယ့် brand/product ကို မသိသေးတဲ့သူဆိုရင် awareness ရလာတာမျိုးတွေ၊ engagement ကြောင့် brand နဲ့ မဝယ်ဖြစ်သေးတဲ့ customer အကြား relation တစ်ခုတည်ထောင်လိုက်နိုင်တာမျိုးတွေ၊ brand ကို သိပြီးသားcustomerတွေ ဆိုရင်လည်း campaign မှာဝင်ပါကြည့်တဲ့အခါ gamification ကြောင့် excite ​and fun ဖြစ်သွားပြီး Brand ကို မှတ်မိကြကာ brand recall ပိုမာလာတာမျိုးတွေ​ စတာတွေကြောင့် customer တွေက ကိုယ့် product category ကို ဝယ်ယူဖို့ စဥ်းစားတဲ့အခါ ကိုယ့် Brand ကို ရွေးချယ်ဖို့ အဆင်သင့်ဖြစ်နေမှာပဲ ​ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် Consideration အဆင့်မှာ run လေ့ရှိတဲ့ audience နဲ့ emotional connection လုပ်နိုင်တဲ့ Affective emotional ads တွေအပြင် ခုလို gamification engagement campaign တွေကလည်း ကိုယ့် Brand အပေါ် desire ဖြစ်လာစေဖို့အတွက် ကူညီပေးနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အခုလို engagement campaign များကို innovatively run ရန်အတွက် လိုအပ်တဲ့ Social AR Filter & Game, Instant Mini-Game, Quiz တို့ကို rangoon.tech က Brand များနှင့် Agencies များအတွက် ဖန်တီးပေးလျှက်ရှိပါတယ်။
Sales တက်အောင် run တဲ့ campaign တွေကတော့ အားလုံးသိတဲ့အတိုင်း ကိုယ့်product ကိုဝယ်ရင် ကံစမ်းမဲပေးတဲ့ ပုံစံမျိုးတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ tech ကိုသုံးတာကြောင့်​ ဆုရသွားတဲ့သူတွေရဲ့ data တွေ ပြန်ရနိုင်တာတို့၊ opt-in form ထည့်ပြီး lead generate လုပ်နိုင်တာတို့၊ ဆုကို real time control လုပ်လို့ရတာ စတဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေကြောင့် traditional campaign တွေထက် အများကြီး efficient and effective ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ့်product ကို ဝယ်မှ ကံစမ်းမဲပေးပြီး ဆုဖောက်ပေးခြင်းတာမျိုးမဟုတ်ဘဲ Coupon ပုံစံသွားချင်ရင်လည်း vouncher code တွေကို ပေးပြီး ကိုယ့်ဆိုင် (သို့) website ကို traffic တက်အောင်လုပ်နိုင် Digital Coupon Campaign တွေလည်း run နိုင်ပါတယ်။ အရင်ကဆို Company အကြီးတွေမှာမှ သုံးနိုင်သည့် Spin & Win , Digital Scratch Card စတဲ့ promotion tools တွေကို အားလုံးလက်လှမ်းမှီနိုင်သည့် စျေးဖြင့် rangoon.tech မှ ဆောင်ရွက်ပေးနေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။
By Kyaw Zin Hted / Tech for Marketing / June 30, 2021 June 30, 2021
ကျွန်တော်တို့ AR ကိုပြော​ပြောနေပေမယ့် ဘယ်လိုမျိုးသုံးရလဲဆိုတာကို မပြောမိခဲ့ဘူးဗျ။ ဒီနေ့မှာတော့ AR Experience ကိုဘယ်လို အသုံးပြုလို့ရတယ်၊ Brand တွေအနေနဲ့လည်း ဘယ်လိုလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတာ share သွားမှာပါ။ အရင်ဆုံးအနေနဲ့ AR နဲ့ VR ရဲ့ ခြားနားပုံကို ဖော်ပြသွားပါ့မယ်။ VR ဆိုတာကတော့ Digital Content တွေကို Headset တပ်ပြီး ကြည့်ရတာဖြစ်ပါတယ်။ User အနေနဲ့ Headset ရှိမှသာ VR experience ကိုခံစားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ AR ကတော့ VR လိုမဟုတ်ပဲ ဖုန်းတစ်လုံးရှိရုံနဲ့ ကိုယ့်အပြင်က တကယ့်ပတ်ဝန်းကျင်အပေါ်မှာ ထပ်ပြီး ဖြစ်နေတဲ့AR Content တွေကို ခံစားနိုင်မှာပါ။
User ​တွေ အနေနဲ့ AR App ကို download ယူ၍သော်လည်းကောင်း website link ဖြင့် Browser ထဲ ဝင်၍လည်းကောင်း Facebook နဲ့ Instagram တို့လို Social Media Appတွေမှာ လည်းကောင်း AR ကို အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့်မို့လို့ App, Web နဲ့ Social Media တို့ဟာ AR ကိုအသုံးပြုနိုင်တဲ့ channel တွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အဲ့ဒီ Channel တွေထဲမှာ ဆိုရင်တော့ ကုန်ကျစရိတ်အသက်သာဆုံးနဲ့ Reach အရောက်ဆုံးဖြစ်တဲ့အပြင် customer တွေအနေနဲ့လည်း အသုံးပြုရ အလွယ်ဆုံး ဖြစ်ကာ customer ရဲ့ Facebook App နဲ့ပင် ARကို အလွယ်တကူအသုံးပြုနိုင်တာကြောင့် Social Media AR ဟာဆိုရင်တော့ Brand တွေအနေနဲ့ marketing အတွက် ရွေးချယ်စရာတစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Social Media ပေါ်က AR မှာတော့ AR effect နဲ့ AR Game ဆိုပြီး ၂ မျိုးရှိပြီး မိမိတို့ Brand ရဲ့ Marketing Strategy နဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ဟာကို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
Web AR နဲ့ App AR တို့ကတော့ Marketing Campaing အကြီးကြီး တွေနဲ့ပိုပြီးတော့ အဆင်ပြေပါတယ်။ ဥပမာ Pokemon Game လို လုပ်ဆောင်ရတဲ့ အဆင့်များသလို ပိုမို စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တဲ့ AR မျိုးကတော့ App နှင့် Web ဖြင့်လုပ်ခြင်းက ပိုမိုသင့်တော်တာမျိုးပါ။ App AR က customerကို ကိုယ့် ecosytem ထဲရောက်အောင် လုပ်နိုင်တာမို့ ငွေကြေးအကုန်အကျ များသော်လည်း user experiene အတွက် ပိုကောင်းသလို user ကိုလည်း ကိုယ့်ရဲ့ asset တစ်ခုအနေနဲ့ AR App ကို ပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
Web AR ကတော့ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့ Link တစ်ခုပဲလိုပြီး ကိုယ့် Website မှာဖြစ်စေ၊ ကိုယ့် online shop platform မှာဖြစ်စေ၊ Facebook နဲ့ Instagram post မှာ ဖြစ်စေ၊ QR code ဖြင့် ဖြစ်စေ User အလွယ်တကူ သုံးနိုင်အောင် ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဥပမာအနေဖြင့် WebAR အနေနဲ့ Navigation လုပ်တဲ့အခါမှာ သုံးလို့ရပါတယ်။ Bus Stop မှာ QR Code Ads လုပ်ထားပြီး အဲ့ဒီ QR ကို customer က scan လိုက်ရင် browser ထဲရောက်သွားပြီး Camera ပွင့်လာကာ AR Digital Content များပေါ်လာပြီး ညွှန်းချင်တဲ့နေရာကို AR နဲ့ navigate လုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
တကယ်လို့ AR ကို စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်တို့ rangoon.techကို ဆက်သွယ်ပြီး အသေးစိတ်တိုင်ပင်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာ။